Ọrụ Mgbasa Vidio | Martech Zone
Onye ọ bụla na-eme amụma afọ-njedebe ha. Echere m na ị nwere ike ịhapụ hoopla niile ma rụọ ọrụ ịzụ ahịa gị n'afọ a na-abịanụ dabere na eziokwu niile. Usoro di iche iche di iche-iche, akpaaka ahia, mkpanaka na vidiyo na-aga n'ihu na-eme ka itinye aka na okporo ụzọ na azụmahịa gị. Nke a bụ nnukwu ozi ederede na stats mara mma nke na-akwado mkpa gị iji mejuputa usoro ịzụ ahịa vidiyo na 2014.
Delos Incorporated keere ndị a Ndụmọdụ Azụmaahịa Video:
plan - Vidio kwesịrị ịbụ akụkụ nke atụmatụ ịzụ ahịa gị niile, usoro ntinye aka nke na-akwado ebumnuche gị. Ducingmịpụta vidio ezughị ezu - ị ga-eji ya! Chọpụta ebumnuche gị - ma ha na-eme ka ị mata ma ọ bụ na-anya ụgbọ ala - ma mepụta usoro ihe ịga nke ọma gị.
Mepụta -'snye bụ gị lekwasịrị ahịa na ihe gị mmefu ego? Ozugbo ị zara ajụjụ ndị ahụ, chọta ụlọ ọrụ na-emepụta vidiyo nke nwere ike ime ka ọhụụ gị dị ndụ. Chee echiche banyere ime ka ndị ahịa nwee afọ ojuju ma ọ bụ ọrụ gị pụrụ iche.
Eme - Tinye okpu mmekọrịta gị ma bido kesaa! Ebee ka ndị ahịa gị na-anọkarị? Chọta ha ma gbasaa okwu ahụ. Chee echiche Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube…
Tags: Ciscodelos depụtaraokwuonye na -emepụta iheFacebookvidiyo facebookinfographiconye na-ere intanetiahịa sherpaVidio Ahịaalụlụ mgbasa ozivideo mgbanwevideo akaahịa vidiyousoro mgbasa ozi vidiyovideo atụmatụvidiyo prmmepụta vidiyovideo nkwalitevideo atụmatụvideosyoutube